Ny Canonicals Cross-Domain dia TSY ho an'ny fanatontoloana | Martech Zone
Ny Canonicals Cross-Domain dia TSY ho an'ny fanatontoloana
Alarobia, Desambra 12, 2012 Talata, Septambra 24, 2013 Nikhil Raj
Search Engine Optimization ho an'ny tranonkala iraisam-pirenena dia a lohahevitra sarotra. Hahita torohevitra marobe eto amin'ny Internet ianao fa tsy tokony hampihatra ny tendro rehetra henonao. Makà fotoana hanamarinana ny vaovao hitanao amin'ny Internet. Na dia mety nanoratra azy aza ny manam-pahaizana iray, tsy midika izany hoe marina foana izy ireo.
Case in point, Hubspot namoaka ebook vaovao Torohevitra SEO & tranokala 50 ho an'ny Marketer Iraisam-pirenena. Mpankafy an'i Hubspot ary manana fahefana ara-dalàna ny fahafahantsika misafidy Agence Hubspot. Saingy, ity ebook farany teo ity dia nanome tendrony ratsy izay mety hanelingelina ireo olona SEO rehefa manatsara ny tranokalan'izy ireo. Nanadihady azy ireo izahay tamin'ny alàlan'ny sosialy ary nanome ny fanondroana an'i Google - saingy tsy nahazo fanehoan-kevitra firy hoe hahitsy izy io. Vokatr'izany dia manoratra ity lahatsoratra ity izahay hampitandrina ireo mpamaky anay.
Ny toro-hevitra SEO Iraisam-pirenena
Rehefa mampiasa sehatra avo lenta (TLD) mihoatra ny iray, Hubspot asaina mampiasa ny marika kanonika miampita sehatra mba hanondro ny tranokalanao iraisam-pirenena hiverina amin'ny tranokala fototrao. Tsy torohevitra tsara izany ary handratra ny ezaka SEO nataonao. The marika rel = "canonical" ampiasaina ho esory ny olan'ny atiny duplicate avy amin'ny tranonkala. Izy io dia ampiasaina hilazana amin'i Google ny kinova ankafizin'ny andiana pejy misy atiny tena mitovy aminy izay tadiavinao Google hanondro sy hiseho ao amin'ny SERP-ny. Manoro hevitra ireo matihanina SEO fa isaky ny misy fanamboarana azo atao amin'ny atiny avo roa heny dia AZA ampiharo ny canonical tags.
Ity ny torohevitra izay Hubspot raha toa:
Ny Canonicals Cross-Domain dia tsy vahaolana
Andao hatao hoe manana 3 gTLD ho an'ny tranonkalako iraisam-pirenena aho - mysite.com, mysite.co.uk, ary mysite.de. mysite.com sy mysite.co.uk dia manana atiny mitovy amin'izany; mysite.de manana atiny mitovy nefa amin'ny fiteny alemanina.
Andao hampiharina izay nolazain'ny ebook. Mysite.com no tranonkala malalako. Noho izany dia hapetrako ny rohy canonika ho toy ny mysite.com ao amin'ny domain .co.uk sy .de. Rehefa tonga eo amin'ny sehatra .co.uk Googlebot dia manaraka ny mari-pamantarana rohy kanônika ary manisy index ny domain ahy.
Raha manao an'ity aho, Tsy hanao index mihitsy i Google my .co.uk sy .de domains ary ireto pejy ireto dia hanao tsy miseho mihitsy amin'ny karoka Google isam-paritra! Ho very ny fahefana rehetra natsangako ho an'ireo faritra isam-paritra ao amin'ilay tranonkala .com!
Ny fampiharana hreflang no vahaolana mety
Raha te hitazona ireo tranokala isam-paritra ianao ary raha afaka manangana fahefana isaky ny TLD kaody isam-pirenena dia AZA mampiasa marika canonika. Google raha ny marina namaly ity fanontaniana ity amin'ny fanampiana azy ireo Webmaster Central forum (Misaotra an'i Anju Mohan). Nilaza i Google fa "aza mampiasa marika canonika" raha tianao ny hanondroan'ny Google ny tranonkalanao marobe. Nilaza i Google fa ampiasao ny rel = "alternate" hreflang = "x" fa tsy izany.
The rel = "alternate" hreflang = "x" nampahafantarin'i Google manokana ho an'ny tranonkala iraisam-pirenena - multiregional sy multilingual. Manampy an'i Google haneho ny kinova marina an'ny tranokalan'ny faritra ho an'ny mpikaroka. Amin'ity tranga etsy ambony ity dia hampiditra tag hreflang ho:
Ampio ity napetraka ity amin'ny lohan'ny pejy tsirairay avy amin'ny faritra ary tadidio fa hreflang ny tag dia manokana ny pejy. Raha misy mitady ny serivisiko ao amin'ny Google UK, dia hampiseho ny kinova fitenin'ny tranokalanay izay mysite.co.uk.
Tags: cross-sehatracanonicals cross-domainhreflangseo iraisam-pirenenafanatontoloana
Dec 14, 2012 amin'ny 12: 52 AM
Marina 100% ianao. Vao avy namaky ity olana ity tamin'ny orinasa iraisam-pirenena aho. Fisamborana tsara!
Dec 14, 2012 amin'ny 5: 10 AM
Misaotra Ryan ..
Dec 14, 2012 amin'ny 6: 13 AM
Tsara! Misaotra nizara… mila miditra ato tsy ho ela amin'ny tranokalanay izahay…
Dec 17, 2012 amin'ny 2: 29 AM
Fomba handehanana nikki !! rel = "alternate" hreflang = "x" dia info vaovao ho ahy ...
Dec 19, 2012 amin'ny 5: 20 AM
Fa maninona raha "Google tsy mihevitra ny fandikan-teny amin'ny fiteny vahiny ho votoaty misy tahadika" dia tokony hampiharantsika ny tag hreflang ho
Dec 19, 2012 amin'ny 6: 14 AM
Raha manana kinova amin'ny fiteny vahiny amin'ny tranokala ao amin'ny sub domain ianao na amin'ny gTLD hafa dia tsy ilaina ny mampiasa ity tag ity satria tsy manana atiny mitovy dika mitovy aminao ianao. Ilaina indrindra ity tag ity raha manana atiny mitovy amin'izany amin'ny fiteny tokana misy fiovana isam-paritra ianao, ohatra, manana atiny ho an'ny mpamaky any Etazonia sy UK ary koa rehefa manana ny zana-tsipika misy ny teny vahiny. Azonao ampiasaina ity tag ity mba hilazana amin'i Google fa ho an'ny olona mitady ao amin'ny Google UK, ny kinova tianao indrindra amin'ny fampisehoana amin'ny valin'ny fikarohana dia ny kinova UK an'ny tranokalanao.
Dec 19, 2012 amin'ny 8: 34 AM
Araka ny fahazoako azy. Misaotra